China Wall yakakwira (desktop) eyewash Fekitori, Wall yakakwira (desktop) eyewash mutengesi
BH33-1011L madziro akatasva ziso kugeza, Girini）
l Shower: Dhonza pasi lever, uye mvura yekugeza inosaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero ndeye 120-180L / min. l Kushambidza maziso: Pusha vhura mubato, eyeosol eyewash inosaswa mukati me1 sekondi, kukwirira uye kona yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu, uye kuyerera kweziso kuri 12-18L / min. Iyo iri-saiti mvura kumanikidza inoda kusvika 0.25-0.4MPA. l lEye geza gungano: Iyo inoumbwa ne304 zvikamu zvekukanda. Iyo 90-degree gokora ...
BH35-1011 madziro akatasva ziso kugeza, Yero）
l Shower: Dhonza pasi lever, uye mvura yekugeza inosaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero ndeye 120-180L / min. l Kushambidza maziso: Pusha vhura mubato, eyeosol eyewash inosaswa mukati me1 sekondi, kukwirira uye kona yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu, uye kuyerera kweziso kuri 12-18L / min. Iyo iri-saiti mvura kumanikidza inoda kusvika 0.25-0.4MPA. L lEye geza strainer: yakakwira-kuwanda PP + 304 kaviri-rukoko strainer, iyo inogona kusefa ...
BH35-1011L madziro akatasva ziso kuwacha, Green）
l Shower: Dhonza pasi lever, uye mvura yekugeza inosaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero ndeye 120-180L / min. l Kushambidza maziso: Pusha vhura mubato, eyeosol eyewash inosaswa mukati me1 sekondi, kukwirira uye kona yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu, uye kuyerera kweziso kuri 12-18L / min. Iyo iri-saiti mvura kumanikidza inoda kusvika 0.25-0.4MPA. k lyeye geza strainer: yakakwira-kuwanda PP + 304 kaviri-sisitimu strainer, iyo inogona kusefa ...
BH33-1011 madziro akatasva ziso kugeza, Yero）
BH38-1010 madziro akatasva otomatiki kushamba kwemaziso
BH38-1009 madziro akatasva otomatiki kushamba kwemaziso
BH35-2011 chena chinongedzo mbiya yekugeza ziso
BH35-1009 madziro akatasva kushambidza maziso
BH33-1010 madziro akatasva kushambidza maziso
l Shower: Dhonza pasi lever, uye mvura yekugeza inosaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero ndeye 120-180L / min. l Kushambidza maziso: Pusha vhura mubato, eyeosol eyewash inosaswa mukati me1 sekondi, kukwirira uye kona yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu, uye kuyerera kweziso kuri 12-18L / min. Iyo iri-saiti mvura kumanikidza inoda kusvika 0.25-0.4MPA. l lBall vharafu: Iwo maviri-chidimbu bhora vharuvhu inogona kuita kuyerera kwemvura yeziso ...
zvinhu: muviri mukuru 304 simbi isina chinhu 3, mudziyo wekugezera: kwete.